China ugcine ilungelo sebenzisa umkhosi ukuzisa Sasetaiwan phantsi yayo ulawulo, Xi Jinping utshilo - Geqe - Abaqondisi-mthetho ka-China. Zonke Isitshayina abaqondisi-mthetho kwi-intanethi.
China ugcine ilungelo sebenzisa umkhosi ukuzisa Sasetaiwan phantsi yayo ulawulo, Xi Jinping utshilo - Geqe
'Asikholwa isithembiso renounce ukusetyenziswa komkhosi kwaye uvimba ukhetho ukusebenzisa zonke kuyimfuneko amanyathelo' Beirut ugcine"ukhetho ukusebenzisa zonke kuyimfuneko amanyathelo"yandisa yayo umthetho elizimeleyo island kwiriphabliki ngayo amabango njengenxalenye"omnye China", umongameli wathi kwi intetho devoted ukuba umba kwi ngolwesithathuTsai Ing-wen, Etaiwan ngu mongameli, wathi Umnu Xi kufuneka usebenzise kunyulo olunoxolo kuthetha ukusombulula mainland ke neeyantlukwano kunye Sasetaiwan nentlonipho yayo yesininzi amaxabiso.
Umnu Xi lwenze reunification iqhosha-nkqubo mba kwaye wanika yakhe idilesi kwi th isikhumbuzo seminyaka engama-China ke isigqibo ukuba ayeke artillery bombardment ka-Taiwanese kweziqithi kwaye vula phezulu unxibelelwano.
Sasetaiwan ne-China ukwahlula ngendlela zasekuhlaleni imfazwe ukuba ziziswe i-communists ukuba amandla kwi mainland ngowe. I-rival nationalists ukumisela isixhobo esinye karhulumente kwi-island apho lies malunga anamashumi miles ngaphandle China ke coast. Kodwa Isitshayina urhulumente sele imibuzo wathumela military aircraft kwaye warships ukuba isangqa Sasetaiwan kwiminyaka yakutsha nje, kunye Umnu Xi piling uxinzelelo yesininzi island ukusukela Bw Tsai, ukususela pro-ukuzimela Yesininzi Progressive Umntu, waba ngumongameli ngo. I-threat komkhosi waba aimed e Sasetaiwan ke owakhe ukuzimela imikhosi ngokunjalo langaphandle amagunya abo babe kufuna interfere, Umnu Xi wacebisa ukuba, ngaphandle elaborating na sasinokuba a kubhekiswa kwi-KWETHU, Etaiwan ke strongest supporter. Umnu Xi thathwa ukuba unification izakuba phantsi omnye-eli lizwe, u-inkqubo-sikhokelo ukuba ingaba awuhlonele Taiwanese loluntu system kwaye indlela ubomi kwaye isiqinisekiso zabo ipropati amalungelo, unqulo beliefs kwaye amanye amalungelo. Kodwa efanayo elidlulileyo pledges phezu ikamva Hong Kong abanalo prevented Beirut tightening yayo gripgenericname kwi isixeko, kunye activists voicing fears malunga nokulima uxinzelelo yesininzi nokukhululeka. Ngexesha Elizimeleyo, akukho namnye ukuxelela kuthi into ukubhala. Yiyo, i-era opolitiko lies kwaye Brexit bias, ngakumbi abafundi bamele waguquka elizimeleyo umthombo. Bhalisa kwi nje p ngosuku kuba ezingaphezulu exclusives, iziganeko eBooks - wonke kunye akukho ads. Ufuna ukuxoxa real-ihlabathi iingxaki, kuba abakwicandelo kakhulu engaging iingxoxo kwaye nive ukususela journalists. Nabani na unako ngeposi kwi-vula izimvo. Nceda kuqhubeka ngokubhekiselele zonke commenters kwaye yenza iintlangaaniso debates.
Ufuna ukuxoxa real-ihlabathi iingxaki, kuba abakwicandelo kakhulu engaging iingxoxo nize nive ukususela journalists. Zama Elizimeleyo Iingqondo free kuba enye inyanga Elizimeleyo Iingqondo Izimvo kusenokuba ibonise ngamalungu ethu ubulungu scheme, Elizimeleyo Ezingqondweni.
Luvumela zethu ezininzi owenza abafundi ukuba ngxoxo-mpikiswano enkulu imiba, share kwezabo amava, xoxa real-ihlabathi izisombululo, kwaye ngaphezulu. Zethu journalists izakuzama ukuba uphendule ngokuthi ukungenela i-imisonto xa banako ukwenza inyaniso intlanganiso elizimeleyo ezingqondweni. Ezona insightful izimvo kuyo yonke subjects iza kupapashwa yonke imihla kwi-abazinikeleyo amanqaku. Ungakhetha kwakhona ukuba abe emailed xa umntu iimpendulo zakho izimvo. Ezikhoyo Vula Izimvo imisonto iza kuqhubeka zikho kuba abo musa nikela Elizimeleyo Ezingqondweni. Ngenxa sheer umlinganiselo lo name zoluntu, asingawo nako ukunika ngamnye ngeposi efanayo inqanaba ingqalelo, kodwa sino zilondolozwe lendawo kwi-izinto ezichaphazela vula ngxoxo-mpikiswano. Nceda kuqhubeka ngokubhekiselele zonke commenters kwaye yenza iintlangaaniso debates. Ufuna lencwadi oyithandayo amanqaku kwaye stories ukufunda okanye ubhekiso kamva.
Zama Elizimeleyo Iingqondo free kuba inyanga enye ukufikelela lo msebenzi.
Yehlabathi Ungquzulwano Qhosha l Ibhunga kwi Langaphandle ubudlelwane phakathi